U-2017 uzoba nemfudumalo, kepha ngeke kube yirekhodi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
U-2017 uzoba nemfudumalo, kepha ngeke kube yirekhodi
Siqala unyaka omusha. Incwadi entsha engenalutho ivulelwe ukuthi siyigcwalise ngemibono, amathemba, izinqumo nezikhathi, okuhle nokubi. Ngokuqondene nesimo sezulu, kuzoba unyaka ofudumele Ngokwesibikezelo se-United Kingdom Met Office, kodwa ngeke kube yirekhodi njengoba kungenzeka nango-2016.
Ukwanda kwamazinga okushisa ngenxa yokukhishwa okuphezulu kwamagesi abamba ukushisa, kwenza unyaka omusha ngamunye ungene ohlwini lwalawo afudumele kakhulu.
Izinga lokushisa lomhlaba wonke ngonyaka ka-2017 lingaba phakathi kuka-0,63 no-0,87ºC ngaphezu kwesilinganiso sesikhathi eside (isikhathi sika-1961-1990) sika-14ºC, ngesilinganiso esiphakathi esingu-0,75ºC. Kusetshenziswa isilinganiso sesikhathi eside sika-1981-2003 esingu-14,3ºC, ibanga lesimo sezulu liphakathi kuka-0,32 no-0,56ºC ngokulinganiselwa okuphakathi kuka-0,44ºC, okwenza kube ngomunye weminyaka efudumele kakhulu. yeminyaka embalwa edlule.
"Lesi sibikezelo, esisebenzisa ikhompiyutha entsha yakwaMet Office, singeza isisindo esibikezelweni sethu sangaphambilini sokuthi u-2017 uzofudumala kakhulu emhlabeni wonke, kodwa mancane amathuba okuthi weqe u-2015 nango-2016," kusho uSolwazi Adam Scaife, iNhloko Yezulu. isikhathi eside eMet Office. Le minyaka emibili edlule ibilokhu ishisa kakhulu kusukela ngo-1850, hhayi nje kuphela ngenxa yokushisa okwengeziwe kwe-El Niño, kodwa futhi nangenxa yokwanda kokukhishwa kwamagesi abamba ukushisa, njenge-carbon dioxide noma i-methane.
Isithombe - Met Office
Yize kunzima ukwazi kahle ukuthi kuzokwenzekani esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside, ukutadisha nokuhlaziya imininingwane nokubheka izinto ezinomthelela esimweni sezulu, njengesimo se-El Niño neLa Niña, ososayensi bakulungele ukuthi kulo nyaka esisanda kuwukhipha ube ngomunye wabashisa kakhulu kwirekhodi emhlabeni jikelele.
Ungafunda isibikezelo esigcwele lapha (ngesiNgisi).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » U-2017 uzoba nemfudumalo, kepha ngeke kube yirekhodi
Umphakathi wase #PorElClima ungeza ngaphezu kwama-700 entities ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu